Ny tohodranon'i Three Gorges, izay lehibe indrindra manerantany! | Green Renewable
Ny tohodranon'i Three Gorges, izay lehibe indrindra manerantany
Tomas Bigorda | | angovo hydraulic, Angovo Hygroelectric, Angovo azo havaozina
Ny tohodranon'i Three Gorges (sinoa tsotra: 三峡 三峡, sinoa nentim-paharazana: 三峽 大壩, pinyin: Sānxiá Dàbà) dia eo amoron'ny ony Yangtze any Shina. Io no orinasa mpamokatra herinaratra lehibe indrindra eto an-tany.
Nanomboka tamin'ny 1983 ny fanamboarana ny tohodrano ary tombanana ho 20 taona eo ho eo. Tamin'ny 9 Novambra 2001 dia nisokatra ny lalan'ny ony ary tamin'ny 2003 ny vondrona mpamokatra herinaratra voalohany dia nanomboka niasa. Nanomboka ny taona 2004 dia nisy vondrona mpamokatra herinaratra 2000 napetraka isan-taona, mandra-pahatapitry ny asa.
1 Ny tohodranon'i Three Gorges,
1.2 Reniranon'i Yangtze
2 Fiovana vao haingana tao amin'ny Three Gorges
2.1 Fampidirana an-tenda
Ny tohodranon'i Three Gorges,
Tamin'ny 6 Jona 2006, noravana ny rindrina farany tavela amin'ilay tohodrano, miaraka amin'ny baomba manapoaka trano 400 misy rihana 10. Vita tamin'ny 30 Oktobra 2010. Olona efa ho 2 tapitrisa no nafindra toerana any amin'ny faritra vaovao naorina ao amin'ny tanànan'ny Chongqing.
Ny tohodrano dia mijanona eo amoron'ny tanànan'i Yichang, faritanin'i Hubei. Ny reservoir dia nomena anarana taorian'ny Gorotkia, ary afaka mitahiry 39.300 miliara m3. Izany dia Turbine 32 misy 700 MW tsirairay avy, 14 no napetraka eo amin'ny ilany avaratry ny tohodrano, 12 amin'ny ilany atsimo amin'ilay tohodrano ary enina ambanin'ny tany hafa, 24.000 MW ny heriny.
Ao amin'ny drafitra voalohany, ity tohodrano tokana ity dia afaka manome ny 10% -n'ny filan'ny herinaratra any Shina. Na izany aza ny fitomboan'ny tinady dia exponential, ary ho afaka hanome angovo ho an'ny 3% fotsiny amin'ny fanjifàna sinoa ao an-trano.
Ity asa goavana ity dia namela tanàna 19 sy tanàna 322 ambanin'ny haavon'ny rano, nahatratra olona 2 tapitrisa ary nilentika 630 km2 ny faritany sinoa.
Miaraka amin'ity tohodrano ity, hifehezana ny fitomboan'ny onin'ny renirano, vokatry ny orana, ka hisorohana ny tondra-drano tanàna mifanila aminy. Ny haavon'ny rano dia tsy hitovy amin'ny 50 m ka hatramin'ny 175 m, arakaraka ny fizaran-taona. Tanjona iray hafa amin'ny fananganana azy ny fanomezana rano amin'ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka sinoa, miaraka amin'ny fahafaha-mitahiry 39.300 tapitrisa metatra toratelo, izay 22.150 tapitrisa no hatokana hifehezana ny tondra-drano.
Tanjona iray hafa ny famokarana herinaratra izay hananany Generator 26 turbinina 700.000 kilowatts tsirairay.
Miaraka amin'ny fanamboarana io tohodrano lehibe io, ny fitetezana renirano amin'ny renirano Yangtze, izay hampitombo ny fitomboan'ny harinkarem-pirenena. Saingy ampahany amin'ny fampandrosoana sy ny fandrosoana, ny tontolo iainana misy ny tohodranon'i Three Gorges dia nandalo fanovana lehibe.
Ity tetikasa ity dia nameno tany maherin'ny 250 km2, tanàna 13 ary vohitra kely an-jatony manamorona ny moron'ny renirano. Ny famindrana noho ny fampandrosoana dia nanery olona maherin'ny 1.130.000 handao ny tranony, izay fandroahana lehibe indrindra teo amin'ny tantara, noho ny fananganana tohodrano.
Mba hanomezana ohatra fotsiny dia nandritra ny taona 2001 dia namokatra herinaratra elektrika 18.060 MW i Espana. Ny tohodrano Three Gorges dia mahavita mamokatra a fahefana isan-taona an'ny 17.680 MW.
Ny renirano Three Gorges Yangtze no faritra tsara indrindra amin'ny renirano Yangtze. Izy ireo dia mamorona andian-dahatsoratra manintona voajanahary sy ara-kolontsaina.
Fiovana vao haingana tao amin'ny Three Gorges
Ity faritra ity izao tontolo izao dia toerana mampidi-doza taloha. Na dia hatramin'ny nananganana ny tohodranon'i Three Gorges aza (vita tanteraka tamin'ny 2006) ny haavon'ny renirano dia nisondrotra hatramin'ny 180 m (590 ft) ary nanjary be ilay renirano milamina kokoa sy azo zahana. Sambo fitsangantsanganana am-polony am-polony no mandeha eo anelanelan'ny Chongqing sy Yichang. Dia mahafinaritra, izay ahafahan'ny mpandeha mahita ny hakanton'ny lohasaha.
Ny Three Gorges dia Qutang Gorge, Wu Gorge, ary Xiling Gorge. Qutang (/ chyoo-tung / 'Qu (anaran'ny fianakaviana) dobo') Gorge dia manomboka ao amin'ny renivohi-paritry Fengjie, sahabo 500 km miala ny tanànan'i Chongqing, ao amin'ny Tanànan'ny Chonqing. Qutang dia sahabo ho 40 km ny halavany ary mifarana amin'ny Wushan (/ Woo-shan / 'Witch Mountain') County Town.
Wu Gorge ("mpamosavy") dia manomboka i Daning miditra amin'ny renirano Yangtze any Wushan. Ny fitsangatsinana ny renirano Daning dia mitondra ny mpandeha amin'ny Lesser Three Gorges, dikanteny voafintin'ny Three Gorges, izay mbola misy toerana napetraka gorges tery indrindra, antsoina hoe Mini of the Three Gorges amin'ny faran'ny hafa. Wu Gorge koa dia sahabo ho 40 km ny halavany ary manatevin-daharana an'i Xiling Gorge ao amin'ny tanànan'ny distrikan'i Badong (/ bar-dong / ara-bakiteny hoe "Atsinanan'i Sihuan sy Chongqing", ary raha ny tena izy dia eo amin'ny sisintany misy ny Faritanin'i Hubei ihany).
Xiling Gorge (/ sshee-ling / 'rojo andrefana') ampahany amin'i Badong, eo amin'ny fihaonan'ny renirano Shennong sy Yangtze. Ny rano mangarahara, ny lalambe mihantona ary ny vatam-paty mihantona ao Shennong Creek dia mitondra mpizahatany ankoatry ny sambo fitsangantsanganana kely hijerena an'io fisarihana io avy eo amin'ny sisiny. Cave Sanyou (/ san-yo / 'mpandeha telo'), izay poety taloha telo malaza no voalaza fa nijanonaIzy io dia lava-bato mahafinaritra, "ny lava-bato tsara indrindra any amin'ny faritra Three Gorges". Ny lava-bato Sanyou dia 10 kilometatra eo ho eo miala an'i Yichang ao amin'ny havoana Xiling. Xiling Gorge dia sahabo ho 100 km ny halavany ary mifarana ao amin'ny tanànan'i Yichang.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny tohodranon'i Three Gorges, izay lehibe indrindra manerantany
Edward Hurtado dia hoy izy:
Salama tsara ry namana. Manao ahoana izy ireo? Eduardo Hurtado no anarako ary injeniera indostrialy aho. Nandritra ny volana maro dia niasa tamin'ny famolavolana tetikasa famokarana Hydroelectric sasany aho. Ireo liana hahafantatra momba izany. Manorata amiko dia holazaiko aminao ny anaran'ny lohahevitra.
Valiny tamin'i Eduardo Hurtado
Fampitahana karazana takamoa
Galicia dia hampiroborobo ny fametrahana boiler biomassa maherin'ny 4.000